Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Joe Gomez Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Complete Defender onye aha ya kacha mara amara; “Joe”. Anyị Joe Gomez Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch Facts (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na Joe Gomez bụ onye na-agbachitere ma nwee ntụkwasị obi. Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole maara banyere Joe Gomez's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Joe Gomez nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Joe Gomez na 23 nke ụbọchị nke May 1997 na Catford, nke a maara dị ka mpaghara dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ London, ebe ebe izu efu na-ejedebe mgbe enwere football na ụkwụ nwa ọ bụla Black British. Amuru ya nne ya Anglo-Spanish na nna Gambian.
Joe Gomez akụkọ nwata ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi, bụ akụkọ banyere onye na-eto eto na onye nwere ọgụgụ isi bụ onye ghọrọ onye nwere nnukwu onyinye pụrụ iche. Ọ sonyeere agụmakwụkwọ na Charlton Athletic dị nso n'oge ọ dị afọ 10 ekele maka elementrị school bụ onye nyere ya ohere iji obi ụtọ na-egwu bọl asọmpi n'oge oge egwuregwu.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ebumnuche Joe Gomez nke ịbụ ndị ịgba ọsọ abụghị naanị ihe na-agafe agafe. N'ime afọ iri na ụma ya, a na-ahụta Joe dị ka onye na-eto eto, onye werela ike ma ọ bụ ịchịkwa ọnọdụ ndị ọkachamara.
O tolitere na-amuta ihe omuma ya na imu akwukwo nke YouTube Rio Ferdinand, Sergio Ramos, John Terry, Jamie Carragher na Hyypia Sami bụ ndị ọ na-ele anya dị ka ihe nchebe ya. N'ihi ogo ya na ọgụgụ isi ya n'oge ọ dị afọ iri na ụma, Joe na-esokarị ndị egwuregwu karịrị ọgbọ ya. Ọ mere ka ọ bụrụ onye mbụ maka Charlton Athletic under-18 team na naanị 13 afọ.
N'agbanyeghị mmasị siri ike site n'ọtụtụ ọgbakọ ndị ọzọ, Gomez nọgidere na Charlton maka ọrụ agadi ya. O mebiri ka ha bụrụ ndị mbụ ha dị na 17 tupu ha abanye Liverpool n'afọ ọzọ. Ndị ọzọ, dịka ndị mmadụ na-ekwukarị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ Joe Gomez:
Gomez kwadoro nne ya, Linda, na nna, Gus, bụ onye nweworo mmasị n'ọdịnihu iji mee ka nwa ha guzosie ike.
Mgbe ọ dị obere, nna ya gwara ndị ọrụ nwa ya ka ha hapụ Joe ka ọ ghara ịhụ akwụkwọ sitere na nnukwu klọb nwere mmasị na ya. Joe gere nna ya ntị ka ọ dị larịị. N'okwu ya…
"Papa m achọghị ka ihe ọ bụla banye n'isi m n'oge ahụ".
N'ihe banyere ịbụ onye isi ala na ntọala, Joe na nne na nna ya biri n'ụlọ mgbe ọ na-eto eto na ntorobịa mbụ ya na Charlton. Ibi n'ụlọ nke ya naanị ya malitere na 2015 mgbe ọ banyere Liverpool. Ya na onye odeakụkọ na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ na-ekwu banyere nsogbu ndị o diri kemgbe ọ kwagara Merseyside na-enweghị nri isi nri ya ma hụ onwe ya na kichin.
N'okwu ya ...
“M ka na-agbalị isi nri nri… na m na-aka mma ka mma. Enweghị enyemaka nke mama m, enweghị m ike ịfefe isi nri dị mfe dị ka ighe-eghe, spaghetti Bolognese ma kpoo ụfọdụ Uncle Bens. Ma, agaghị m ekwu na m nwere ike ịme ihe dị egwu. Ejirila m nri nne m! ”.
N'ihi ahụmịhe ọrụ ya na ndị otu ya, Joe achọpụtala ugbu a na ọ nọghị n'ụdị dị iche. Ọ dị mkpa ịmara na nne na nna ya na ụmụnne ya bụ nnukwu ihe na-eme ka ọ daa. Joe Gomez nwere ụmụnne nwanyị atọ na nwanne nwoke.
E nwere otu ndị enyi m banyere n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Taa, anọ m n'otu obodo. Ọ bụrụ na m gbalịa ịgbanwe ma ọ bụ butere onwe m ụzọ, ha ga-agwa m ozugbo. Ọtụtụ mmadụ na-eche na ndị egwuregwu bọọlụ nwere ụdị ndụ na-acha ọkụ ọkụ wee pụọ ma mee ụdị ihe niile. Abụ m onye na-abụghị. Abụm nnụnnụ-ụlọ, na-enwe mmasị ịnọnyere ezinụlọ na ndị enyi. Ọ kaara m mma n'ebe obibi dị jụụ. ”
Enyi Joe Gomez na nwunye ka ha bụrụ:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị England niile na-agba ọsọ, e nwere nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma.
N'okpuru ebe a bụ enyi nwanyị Joe Gomez, onye nyeere ya aka idozi kichin ya niile na-ekele ndị mụrụ ya bụ ndị na-ejide n'aka na nwa ha nwoke na-alụ na ọbụna lụrụ nwa nwanyị Black Britain nwere njikọ na mmalite nke Africa ha.
Joe Gomez Ndụ Nke Onwe:
N'ihe ndekọ nke onwe ya, Joe Gomez bụ nkwupụta na ngwa ngwa (gosipụtara ma ọ bụ jiri ikike iche echiche ma ọ bụ meghachi ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè). Ọ na-anọchite anya mmadụ abụọ dị iche iche na otu ma ị gaghị ama onye ị ga-eche ihu.
Nke mbụ, ọ na-emekọrịta ihe, na-ekwurịta okwu ma dị njikere maka ntụrụndụ, na-enwe mmetụta nke mberede na-adị njọ, na-eche echiche ma na-erughị ala. Gomez nwere mmasị na ụwa n'onwe ya, na-achọsi ike, na-enwe mmetụta mgbe niile na enweghị oge zuru oke iji nweta ihe niile ọ chọrọ ịhụ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị nye gị àgwà ndị ọzọ gbasara Joe Gomez Personal Life.
Ike Joe Gomez: Ọ dị nwayọọ, nwee mmetụta ịhụnanya, ịmata ihe, na-agbanwe agbanwe, nwere ike ịmụta ngwa ngwa na ịgbanwe echiche.
Adịghị ike Joe Gomez: O nwere ike na-atụ ụjọ, na-ekwekọghị ekwekọ na enweghi obi abụọ (nke ka ukwuu n'ime kichin).
Ihe Joe Gomez Na-amasị: Na-ele anya ọma, na-agba ọsọ na mmiri (foto dị n'okpuru ebe a), magazin, mkparịta ụka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, njem dị mkpirikpi Obodo Merseyside na veins na-eto eto dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Ihe Joe Gomez achọghị: N'ịbụ onye naanị ya, ịbụ onye a na-ejigide, ịzụghachi ọzụzụ na ihe omume.
Idobe anya ya:
JURGEN KLOPP mgbe ọ hụrụ foto dị n'okpuru ebe a, gwara Joe Gomez ka ọ kpọpụ ya "Muscly, osimiri nwata" lee anya ka o wee banye na otu egwuregwu Liverpool.
N'okwu Jurgen…"O nwere ọtụtụ akwara, ị ga-achọkwa ahụ dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ị na-aga n'akụkụ osimiri ma ọ bụ ihe ọ bụla."
N'ịbụ onye nwere àgwà na-erube isi, Joe gere onye nkụzi ya ntị.
Gomez na-ahọrọ igwu egwu dị ka etiti-azụ mana ọ nwekwara ike igwu egwu dịka n'akụkụ ọ bụla. A kọwawo ya dị ka onye egwuregwu zuru ezu
Dị ka a hụrụ na foto ndị gara aga, a na-ahụkwa Joe Gomez maka egwuregwu ya na ike ya. Ọ na-enwe ike ịmepụta ike na dị ize ndụ na-agba ọsọ n'ọhịa na mwakpo. Iji chebe onwe ya, ọ bụ onye iro na-achịkwa ya. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ onye nchechite zuru oke.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Joe Gomez Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Charlie Austin Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography